U-Yolanthe Cabau kunye ne-DNA yamapolisa, umzobo kaJohn de Mol (njengeendaba ze-ANP): UMartin Vrijland
Umbuzo ubundikhathaza okwethutyana: UJohn de Mol ngowona mkhanyo mkhulu eNetherlands? UJohn de Mol ungumnini we-ANP, i-General Dutch Press Office kunye neTalpa Network, ke uqala ngokubuza ukuba ngaba akanakho na ukusebenzisa iindlela ezifanayo ukwenza iindaba ezingezizo njengoko ezisebenzisa kumdlalo wamapolisa onje DNA ukuvelisa. I-Yolanthe Cabau inokudlala indima ekhokelayo kolu luhlu lwamapolisa mtsha nolubonakala luhlangabezana nazo zonke iinjongo zokusasaza.
Sele kuyiminyaka ndibhala ukuba iDNA isetyenziswa njengegama lomlingo ukudala ingcinga yokuba ungayisebenzisa ukusombulula amatyala okubulala, kodwa ke ukuba le propaganda yenzelwe ngasese ukukwazi ukuseta ugcino lwelizwe ukuze kungekudala (phakathi kwezinye izinto) ukwenziwa kwemfuza Inani labantu linokwenzeka kwiinethiwekhi ze5G (jonga apha). Yiyo loo nto i-propaganda ejikeleze 'iDVD njengesixhobo somlingo' kufuneka inyuswe ibekuphakame okukhulu. Uluhlu lwamapolisa olunika umbono wokuba ungazisombulula iimeko zokubulawa kwe-DNA kukusasazeka njengoko, umzekelo, ityala likaJos Brech, apho ngequbuliso emva kweminyaka eyi-20 yeDNA yeDNA yafunyanwa kwisambatho esiphantsi kukaNick Verstappen. Igama elithi DNA kufuneka licwangciselwe kwingqondo yakho engaphantsi kwengqondo kwaye yintoni enokuba ngcono kunokusebenzisa i-asterisk enje ngo-Yolanthe kulonto? Ukufumanisa ukuba iDNA ayibonisi nto konke konke nokuba iDNA yakho ikwisiseko sedatha, ubulungisa bunokusebenzisa iDNA kwindawo yolwaphulo-mthetho ukuze ufunyaniswe unetyala. IDNA yakho inokukhutshelwa ngokulula kwiilebhu (jonga apha).
Omnye umbuzo endihlala ndizibuza wona ngulo: Ngaba kunokwenzeka ukuba uJohn de Mol afumane amawaka ezigidi kwimveliso yeTV yedwa okanye ngaba usapho lakwa-Mol lwadlala indima ekhokelayo kwimveliso yeendaba ezingeyonyani iminyaka? Emva kwayo yonke loo nto, banazo zonke iindlela abanokuthi banazo, ngoko kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba bakwazi ukurhola umthumbi wokuphangwa kweHeineken UPeter R. de Vries Kwindima ekhokelayo njenge "intatheli yolwaphulo-mthetho" kunye nabahlobo uCor van Hout, uWillem Holleeder, uFrans Meijer noJan Boellaard njengabalingisi abaphosileyo.
Ngaba uyakholelwa ukuba u-Willem Holleeder kwelona tyala lakutsha nje nodade wakhe u-Astrid njengowona mdlali mtsha kwi-firmament ejikeleze ukubulala okumanyumnyezi okwenziweyo? Kuthekani ukuba yonke le isepha kwaye ukhohlisiwe ngokupheleleyo. Ngaba uHolleeder akenzanga galelo libalulekileyo kwinkqubo enkulu yomboniso apho igama elithi 'ingqina lesithsaba' lenziwa liqhelekileyo? Ngaba uyazi ukuba kuthetha ukuthini oko? Ilizwi lithetha konke .. Isithsaba (ubulungisa egameni lesithsaba) sinokubeka ngaphambili ubungqina. Obo bungqina buvumelekile nditsho nokuhlala ungaziwa.
Ayizukumangalisa into yokuba usapho lakwa-Mol lufumene imali yalo eninzi ngeendaba ezingezizo ezihlawulelweyo kumbiza werhafu kwaye uPeter R. de Vries ngumnxibelelanisi wePsychOp (umsebenzi wengqondo) onokuthi enze umthambo ebantwini. Ayizukundothusa ke into yokuba uninzi lwezinto ezinkulu ebezisasaza kwimithombo yeendaba beziindaba nje ezingezizo. Okokugqibela, zonke iindlela ziyafumaneka kwi-studio zikaJohn de Mol (kunye nezo zemashumi eminyaka).
Ngaba uyifumana iyothusa into xa ndisithi andikaze ndikukholelwe ukuthinjwa kukaFreddy Heineken kunye nomqhubi wakhe u-Ab Doderer? Ngaba ayifakwanga uphawu lweHeineken kwimephu kwihlabathi liphela? Kusenokwenzeka ukuba akukho ntengiso ibhetele. Indawo yonke ebizwa ngokuba yiAmsterdam Mafia zange yabakho kuluvo lwam. Zingamabali othando emxholweni 'Ingxaki, Ukuphendula, IsisombululoMsgstr ". Uhlala udinga iiglogs ezinkulu ezinkulu ukuze ukwazi ukuphumeza imeko yamapolisa ngakumbi. Yonke into esiyaziyo ngayo ivela kwimithombo yeendaba. Uyazi, kwiarhente yeendaba enjeya evela kuJohn de Mol. Ewe kunjalo kukho iincwadi malunga nemibhalo ebhaliweyo kunye neefilimu okanye imiboniso yethiyetha eyenziwe ngayo. Okanye ngaba bahlala beyimveliso yeTV kwaye ngaba bahlala bemidlalo yeqonga?
Inkqubo yeHolleeder, umzekelo, ibonakalisile indlela elisebenza ngayo ityala kunye namajelo osasazo kunye nokuba bungakanani na (okanye ngokwenene abukho) ubungqina obufunekayo ekutshutshisweni. Intshayelelo kunye nokutywinwa okuqinisekileyo kokuqina okusekwe kumangqina anesithsaba kunye nokungcatshwa kosapho (ngaphandle kobungqina obubonakalayo obubonakalayo) kudala igumbi lenkqubo yezobulungisa ukuze wonke umntu ashiye imigoqo yobomi. Ubulungisa kufuneka buthi nokuba lingqina lesithsaba esingaziwayo okanye ubulungisa kufuneka nje bakholelwe ibali lika dade kwaye ukugwetywa kugqityiwe. UWillem Holleeder noPeter R. de Vries badlale indima ebalulekileyo ekufezekiseni loo mthetho mtsha nomthetho wamatyala. Ngaba inkqubo yeHolleeder ke yinkqubo ende enomoya omde ethe yasasazeka kwiminyaka edlulileyo? Oko kuyayisebenzisa kwaye kuqinisekisa ukuba siyakholelwa kumfanekiso 'wamakhwenkwe anzima'. Wabuya wathini uJoseph Goebbels? "Ukuba wenza ubuxoki obukhulu kwaye uwuphindaphinde ngokwaneleyo, wonke umntu uya kuyikholelwa".
Kwaye, umzekelo, andikholelwa kwanto malunga nokuhlaselwa komculi uRob Scholte, (ngokomthombo ongaziwayo) owayefanelekile ukunqunyulwa umlenze ngenxa yokugula kungekudala ngaphambi kolo hlaselo. Ngaba lomzuzu ungasetyenziselwa ukwenza inqanaba lokuhlaselwa? Inokwenzeka njani ukuba kuqhume ibhombu yemoto kwaye inganqunyulwa njani imilenze kaScholte ngelixa "intombi yakhe" uMick Hoogendijk (owayehleli kwisitulo somqhubi) ebalekile engakhange aqhekezelwe (kodwa waba nesiphene)?
Ukuba uyayiyeka icwile kwaye ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ngamabali amangalisayo. Benza, nangona kunjalo, babhenela emcabangweni wethu, kuba i-NOS yeendaba yeendaba iyayixela kwisuti ecocekileyo kwaye kuba ubona imifanekiso nayo. Kodwa ewe, uJohn de Mol uneekhamera ezaneleyo, abantu kunye nezixhobo zokubeka izinto kunye.
UPeter R. de Vries ngokwenene uhlala enendima ekhokelayo xa kufikwa kumatyala amakhulu okubulala. Ungumntu osombulule ityala lokubulala uMarianne Vaatstra ngeDNA yomlingo. Ungumntu owalinganisa icala likaNicky Verstappen kulo nabantu (ngeDNA yomlingo). Nguye ke oyindoda ngasemva kwazo zonke ezo zinto zinkulu (PsyOp?) Imicimbi: ukusuka ku-Anne Faber ukuya kwimeko kaRomy noSavannah kunye nayo yonke imveliso yeDNA esinokuthi siyilandele kwimithombo yeendaba. Ndiyibiza ngokuba yimveliso, kuba emva kwayo yonke loo nto, uninzi lweendaba luvela kwi-arhente yeendaba ephethwe ngumgcini-bhiliyoni kunye nomvelisi weTV uJohn de Mol. Ngubani ke osixelela nge 100% ngokuqinisekileyo ukuba singawathemba onke la mabali? Ngubani obaxelela ukuba besikade singaboni ubungqina beendaba ezingeyonyani iminyaka? Ah, linda! Imidiya iya kukuxelela. UMatthijs van Nieuwkerk, uEva Jinek, uJeroben Pauw kunye nabanye abenzi beengcinga. Emva kwayo yonke loo nto, benza umbono wakho. "Sithembele kwaye zonke iindaba ezingezizo zivela eRussia"
Ndibona uWillem Holleeder ngokumnandi ngokumnandi kwi-cocktail kunye noCor van Hout, uWillem Endstra kunye Theo van Gogh kwiziqithi zeWaikiki. Sicinga ukuba siyayazi into eyenzekayo emhlabeni, kuba umbono wehlabathi upende ngokupheleleyo ngamaphephandaba, unomathotholo kunye nomabonwakude. Iingxoxo zosasazo lweNtlalo zihlala zigcinwe ngumphathi wombuso wethrafikhi, ekufuneka ijonge ingxoxo kwicala olifunayo. Iiprofayili ezinzulu zokwenza inkohliso (kubandakanya nenethiwekhi enyanisekileyo) zinokumiselwa ngokulula oku. Akukho nto siyaziyo. Sicinga ukuba siyayazi, kodwa loo ngcinga ifakwe imibala liqela elincinci nabaphethe imithombo yeendaba nabezindaba zentlalo. Ifilimu 'Wag inja'kukudlala komntwana xa kuthelekiswa noko sikubona mihla le.
Uludwe lwekhonkco lovimba: parool.nl, imdb.com, ukuthwalwa.ineken.nl
tags: ANP, Dna, eziziimbalasane, UFreddy Heineken, john de mol, iindaba ezibuxoki, UNick Hoogendijk, indawo yokushicilela, UPeter R. de Vries, URob Scholte, UWillem Holleeder, UYolanthe Cabau
28 Agasti 2019 kwi-15: 23
Yenza iziqwenga kwakhona! Enkosi!
Ewe kunjalo ... Bendingayazi nokuba i-de Mol sele ingumnini we-ANP.
Ngokwam ubuze uphando lweNoses, ndiyazi emva kobugwenxa obuninzi ukuba le yiklabhu engemva kwayo yonke into. U-Heineken, umzekelo, ngaphandle kwebastard yokukhohlisa nomkhulu uPeteren, kwicala likanina uCarla Breitenstein, ebuza uNazi.
Kulungile ungacinga, ke, yey, yeka, silumko. Ukuba bekungenjalo kum ukuba ndinyamezele ngendlela engathethekiyo olu lwalamano xa kufika ubumnyama, izinto ezoyikisayo ezingenako ukukunyamezela ukukhanya, ukuba kufanelekile ukuba kube njalo, lolu phando.
UHeineken ukwincwadi emnyama ka-Epstein ... ngoko weza nesiqithi ..
Igosa lamapolisa uKlaas Wilting ewe likwabuza impumlo. Kuya kufuneka, kuba awuthembeli mntu ngezi ntlobo zobuxoki, ngaphandle kweyona klabhu inobuqhetseba emhlabeni owakha waziwa.
I-Holleeder ngokuqinisekileyo sele iyaziwa ngempumlo yayo.
UTalpa unophawu lomthi weKabbalah; incwadi yegqwirha ye-talmudic igcwele ubuqhetseba eyamkela ngokupheleleyo iklabhu. Unokubabiza ngokuba "ngamaLuciferians," "Cabal," okanye Sabbateans.
Ndibabiza ngokuba "ziimpawu ezingezizo." Ngaba ukuloo mlo ngokuchasene nobuSemitism, bokunyanzeliswa kuthi.
Utat'omkhulu uMol naye wayenempumlo. Kodwa uLinda noJohn, njengoBil Gates, banokuthi "bayihlaziye"; imile kancinci.
Izenzo zale klabhu zoyikekayo kangangokuba ungaze ungazihoyi.
Kuphando lwam ndafumana onke la magama:
U-Epstein wayengutata ka-Askhenazies.
UTrotzky, uLenin, uStalin, uMarx, uYeltsin, uPutin, uBush, uClinton-Rodham, u-Obama (umama), uTrump (jaja), uMelanie, uNetanyahu, u-Antony Weiner, u-Weinstein, uDortoux-icala, uMossad, u-Isis, uCia, uMike Pompeo, URothschilds, uHitler, uPopu uFrancis, uZorreguieta, Windsors, Churchill, Beatrix kunye no-'Alfred Henry (Freddy) Heineken ', umama wakhe ngu-Ask. naye, uCarla Breinstein, uSoros
U-Einstein, uDarwin, uSteven Spielberg, uBill Gates, uGlenn Vala, Kissinger, Qalisa, Murdock, Dick Cheney, JP Morgan, Mussolini, Buzz Aldrin (Nasa fake moonlanding).
UTrudeau, Aldous Huxley, uCharles noJared Kushner, uJacky Kennedy, uApelbaum Fam. (Ngubani obhale kwakhona ibali lobuxoki leBolshevik emva kokubulala uSolshenytsyn), uDarwin, uKumkanikazi u-Elizabeth, u-Al Gore,
UMaxwell (Robert 'wesipili', kunye noGishlaine), uZimbardo (ulingelo lobuxoki bokuma), Fam. U-Kravis, ongumnikazi weMacron kunye ne-jpg, i-5G pusher (FDA) uBrad Gillen, uRichard Branson, u-Boris Johnson, uMeyi, u-Thatcher, uSarkozy, uRockefellers, uJulie Gerberding (CEO we-Merck), uRobert Gallo umyili we-Aids,
Abezobupolitika eNetherlands; UCohen, Asscher, Kok, Klaver, van Agt, Timmermans, Deijsselbloem, Schippers, Demmink, Hiddema, Peter R. de Vries, Juan Guaido (Venezuela) Jair Bolsonaro (Brasil), Zorreguieta (utata M.), Victoria Nuland (Kagan usapho, itshatyalalisiwe iUkraine), iTimmermans, iJuncker (i-EU) Nixon, iRockefeller, iiBolsheviks ... njl njl.
Ngamafutshane, ngokwaneleyo ukuze ukhathazeke. Kunzima kakhulu ukungqinisisa konke; ekugqibeleni uphumelele. Kodwa ziinkosi kubugcisa bokwenza ubuqhetseba.
Ngaphakathi kweTalpa ubona uGordon, Albert Verlinde, CEO kaPeter de Mönnink, uJan Versteeghe, njl njl. Kunye nongokugqibela kodwa uLil Kleine, obize intombi yakhe 'iZiyon'.
Ukufunyanwa okuhlukileyo kukuba uCor van Hout kunye noTheo van Gogh bobabini baneentloko ezifanayo. Kwaye ngokuqinisekileyo uTheo 'unempumlo' kwakhona. URob Scholten naye. Kucace gca kum ukuba kukho "umoya" omnye emva kwesiqwenga somhlaba esipheleleyo ngoku.
Amahlathi asemlilo. Bekumnandi. Oku kufuneka kuza kukhanya.
28 Agasti 2019 kwi-17: 08
Enkosi Vrijland, kodwa ungacingi ukuba yipastard, wonke umntu wayibona loo nto ekude
Ukuhlaselwa kukaRob Scholte kwakuphefumla komoya omtsha, kodwa abanye abadlali kufuneka ukuba babeqeshiwe ngurhulumente. Ifaka inkcazo kuMnumzana Scholte uqobo, ukusebenzisana kunye namandla nokudlala inja elunywe ngaphandle ngenxa yamandla afanayo (urhulumente), loluphi uhlobo lokufuya olo?
Udliwanondlebe oluboniswa nguMnumzana Scholte kwiwebhusayithi yakhe ukusuka kwiBhari ayimfanelanga ncam, akukho kwanto anokuyenza kuluntu .... kodwa abenzi bobubi bahamba nje ....
Ewe kunjalo, ayinguye wonke umntu ovumelekileyo ukuba apende kwiNdlu yasebukhosini ngolo hlobo, iyimpazamo.
Kwaye uthini ngendima kaMick Hoogendijk? Utyhala i-ajenda ye-transgender ngeendlela zeefoto, iziqwenga zeephazili ziwela kunye ngale ndlela.
Imithombo yeendaba iqinisekisa ukuba abantu bokwenyani njengoMartin Vrijland abahlonitshwa kumaphephandaba okanye kumabonwakude, uDe Mol uhlala enguMol, olunjani ukuzala! ? Ukufuya inzala
30 Agasti 2019 kwi-12: 15
Zininzi ke ezi zityholo zokurhanela.
I-1 Ukuphangwa kukaHeineken kukuphangwa kobuqhetseba kwaye kuye kwagqitywa, ngoko ayenzekanga
I-2: URob Scholte khange abenayo ibhombu (i-grenade yesandla) phantsi kwesihlalo sakhe, wow!
kwaye: I-3 ngokuqinisekileyo i-DNA TV isebenzisa ingqondo ngokuchasene nabantu abasebenzisa ... iincwadana
Kwaye akukho mntu unika impendulo, nokuba ayithanga na kwiqela likaHeineken noRob Scholte? ke uya kuphantse wacinga ukuba ayisenakuba sokrokrela.
« Yintoni eyinyani yokuhlaselwa ngokufa ngenxa yokuhamba ngeenyawo kwa-Assen?
UKUGQIBELA: ipilisi yokuvuselelwa ngokutsha yinyani! Indoda eneminyaka ubudala ye-80 iginya okokuqala emva kovavanyo kwizilwanyana »
Utyelelo lulonke: 4.146.627